Punctuation - Diksionera amin'ny Internet ho an'ny ankizy
March 10, 2017 Septambra 20, 2013 by Malagasy definition
Home » mari-piatoana
QUOTATION MARK ""
Ireo teny marimaritra iraisana dia matetika ampiasaina mba hampidirana ireo teny manokan'ny mpandahateny, ary hametrahana teny izay noresahina.
a) Nanontany anay ny mpampianatra anay hoe: "Te-hivoaka anio ve ianao?" (Teny fampidirana mivantana)
b) Ny teny hoe "oram-baratra" dia matetika miteraka tahotra eo amin'ireo tanora ao amin'ny vondrona misy antsika.
Ny doka iray dia manolotra lisitra iray, teny filamatra mivantana, ary ampahany amin'ny fehezanteny iray izay fanazavana. Mampiasaina izy io aorian'ny fanoratana fanoratana, aorian'ny fampakaram-bady ao anaty taratasy taratasy ary eo anelanelan'ny isa amin'ny fotoana.
a) Nividy ny vokatra manaraka tao amin'ny fivarotam-panafody: pop, gazety, ary tavoahangy shampoo.
b) Nianatra izao manaraka izao aho: efa antitra loatra aho ary nihazakazaka mba hifaninana.
c) Namaly avy hatrany izy hoe: "Tena tsy manan-tsiny aho."
d) Ny zavatra nataony dia nahatonga ahy hieritreritra zavatra iray: valifaty!
e) Dear Lucas:
f) Ny zavatra niainako tany amin'ny masoandro dia nahatonga ahy hieritreritra zavatra tokana iray ihany: rano!
g) 3: PM PM
Ny apostoly dia ampiasaina mba hampisehoana ny fananana (manana-singa sy maro), vanim-potoana sy vola.
Izy koa dia miasa ho toy ny tompona toerana ho an'ny taratasy tsy hita. Ankoatra izany, ampiasaina hanamboarana fifanarahana izy io.
a) Lalao racquet an'i Laura
b) androany ohabolana
c) Ny lanjany telo dolara amin'ny masomboly mavomavo
d) ny tsirairay no mihevitra
e) aza, tsy afaka
Ny famokarana halimo dia ampiasaina hanitatra na hampitombo ny eritreritra niandohana sy ny fizarana sora-baventy amin'ny fehezan-teny voasoratra.
a) Tsy nahomby ny fiezahako farany niampita ny ranomasina; Tena loza tokoa izany!
b) Ny fientanam-po dia nanorina tsy tapaka; Nihazakazaka aho rehefa nitazona ny masoko teny an-dalana.
PERIOD, FANAMARIHANA, FANONTANIANA MARK. ! ?
Ny fehezan-teny rehetra dia feno amin'ny fe-potoana, marika manaitra na marika fanontaniana.
Ny fe-potoana dia ampiasaina amin'ny faran'ny fehezanteny mahazatra.
Toy izany koa no voasoratra ao amin'ny faran'ny fampakarana, ny voalohany ary ny teboka folo.
Ampiasao ny marika fanalahidy hanamarihana ny fiafaran'ireo fehezan-teny izay manandrana maneho fihetseham-po mahery vaika ny mpanoratra.
Ny marika fanontaniana dia ampiasaina rehefa misy fanontaniana mivantana ary mampiseho ny fisalasalana mikasika ny fahamarinan'ny zavatra iray.
Ny takelaka dia ampiasaina mba hanasarahana fehezanteny maromaro, fehezanteny sy teny ao anaty fehezanteny; amin'ny daty; adiresy, mametraka fandefasana / fanehoan-kevitra sy fanelanelanana, adiresy mivantana ny olona iray amin'ny alàlan'ny hafa ary koa amin'ny fanoratana taratasy.
a) Tao anaty kitapo no nahitanay ny racettes, ny kasety, ary ny baolina amin'ny tennis.
b) Janoary 1, 2001.
c) 134 Sunset Drive, tanàna vaovao, Aostralia
d) Faly be aho fa niezaka ny tsy hampiseho fihetseham-po.
e) Laura, tongava atỳ! f) Ry Paul,
Sokajy Learning English Tips	Post Fikarohana
saingy - afa-tsy